Dagaal u dhaxeeya Ciidamadda Dowladda iyo Alshabaab oo ka dhacay Deegaanka Ceelwareegoow ee Shabeelaha Hoose. – Hornafrik Media Network
Dagaalkan ayaa ka dhashay markii Ciidamo Milatari ah oo ku wajahnaa Degmadda Baraawe ee Shabeelaha Hoose ay jidka u galeen Maleeshiyaad ka tirsan Kooxda Alshabaab.
Iddaacadda ku hadasha Afka Kooxda Alshabaab ee Andalus ayaa baahisay in Dagaalka oo socday Saacado badan uu ku billowday Qaraxyo mid ka mida ay la beegsadeen Gaari Ciidanka Dowladda Sahay u saarnayd, kadibna uu dagaal toos ah halkaasi ka billowday, Waxayna sheegteen in intii uu Dagaalku socday in sidoo kale ay gubeen Gaari kale oo Ciidan.
Warka ay baahisay Iddaacada Alshabaab waxa uu sidoo kale intaasi ku darayaa in Qarax ay la eegteen Ciidan lugaynaya oo qayb ka ah Ciidamaddii ay la dagaalameen, kadib markii uu Dagaalku dhamaaday, Waxayna sheegteen inay halkaasi ku dhinteen Askar Badan.
Ka Sakoow sheegashadda Alshabaab ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Ciidanka Dowladda Somalia, iyo Maamulka Gobalka Shabeelaha Hoose. balse Ciidamadda Milatariga ah ee Dagaalku qabsaday ayaa gaaray Deegaanka Shalaanbood, halkaas oo ay ugu timid Diyaarad Nooca Qumaatiga u kaca ah oo loo malaynayo inay Dhaawacyo soo qaaday.